ओली–गोयल भेट : सत्ता जोगाउने फण्डा « Nepal Bahas
ओली–गोयल भेट : सत्ता जोगाउने फण्डा
प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७७, बुधबार १५:५३
१२ कार्तिक, काठमाडौं । कोरोना कहरकाबीच यो वर्ष अर्थात २०७७ को विजया दशमी लगभग सकिएको छ । नौरथा लागेपछि मानिसमा दशैंको रौनक सुरु हुन्थ्यो । तर यो वर्ष कोरोनाका कारण त्यो रौनक र खुसी भएन । औपचारिक रुपमा दशैं सकिन कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पर्खनु पर्छ ।
आजदेखि सरकारी अड्डा खुलेका छन् । मानिस फेरि पुरानै लयमा फर्कने प्रयत्न गरिरहेका छन् । राजनीतिक क्षितिजमा समेत अब विस्तारै सकृयता बढेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्रको सत्ता संघर्ष उस्तै छ । अझ नेकपा भित्रको अन्तर्संघर्ष त चरमचुलीमै पुगेको छ ।
लामो कसरतपछि गएको भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले पार्टी एकता र अध्यक्षद्वयको कार्य विभाजनलाई औपचारिकता दिन निर्देशन नै जारी गरियो । यसले लगभग विभाजनकै डिलमा पुगिसकेको नेकपालाई तत्कालका लागि टालटुल गर्ने काम गरेको थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको केपी ओलीले पार्टीले दिएको निर्देशनलाई धोती लगाइदिएका छन् । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिमा उनले एकलौटी गरेपछि नेकपा भित्रको विवादले नयाँ रुप धारण गरेका छ । अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको बैमनुस्यता र मनमुटाव उत्कर्षका पुगेको छ । ओलीविरुद्ध प्रचण्डले शीर्ष नेताहरुको साथ र सहयोगमा मोर्चाबन्दी नै थालेको अवस्था छ ।
दशैंको मुखैमा ओलीले नयाँ फण्डा मिल्काएका छन् । भारतीय गुप्तचर विभाग ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई ओलीले बोलाएर आधा रातमा गोप्य मन्त्रणा गरेका छन् । पार्टी र सरकारका मन्त्रीहरुलाईसमेत कुनै जानकारी नदिई ओलीले यस्तो खेल खेलेका छन् । जसले पार्टी भित्रको मतभेद अझै चुलिएको छ ।
आखिर ओलीले अहिले नै गोयललाई किन बोलाएर भेटे त ? यो गम्भिर प्रश्न हो । जानकारहरु भन्छन् – पार्टी भित्र हुन सक्ने ध्रुवीकरण रोक्न नै ओलीले यो खेल खेलेका हुन् । अब प्रचण्ड र नेपाल पक्षबीच कार्यगत एकता हुने लगभग तय भएको छ । त्यसको सुरुआत कर्णाली प्रदेशबाट थालिएको छ । यो क्रम अबका दिनमा अन्य प्रदेश र अन्ततः संघीय सरकारमा समेत देखिने छ । त्यसको राम्रो छनक पाएका ओलीले भारतीय खुफिया संस्थाको सहयोग लिन उचित ठाने । ओलीको सम्बन्ध भारतीय राजनीतिक क्षेत्रमा कम तर खुफिया क्षेत्रमा व्यापक रहेको छ । यसको खुलासा यसअघि धेरैपटक धेरै प्रसंगमा भइसकेको छ ।
त्यसैको एउटा श्रृँखला मात्र हो यो गोयल प्रकरण । यस्तो बुुझ्ने धेरै छन् । पार्टी भित्रकै नेताहरुले ओलीको नयाँ फण्डा बुुझिसकेका छन् । एकजना स्थायी कमिटी सदस्यले त ओलीको असली चेहरा देखियो सम्म भन्न भ्याएका छन् । ओलीको नक्कली राष्ट्रबाद गोयतको लगौंटीमा विसर्जन भएको उनको टिप्पणी छ ।
ती नेताले आज भन्दा आठ वर्ष अगाडिको एउटा घटना स्मरण गरे । ०६९ साल बैशाख ३१ गतेको राति ओलीले राजधानीको चल्तीको एउटा पाँच तारे होटलमा रअका प्रतिनिधिसँग गरेको भेट थियो त्यो । भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि पिटर जेपी हनामानको सहयोगमा तत्कालीन नेकपा नेता ओलीले भारतीय गुुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सञ्जिव शर्मासँग गोप्य भेट गरेका थिए । त्यसको खुलासा कान्तिपुरका सम्पादक रहेका पत्रकार सुधीर शर्माले आफ्नो पुस्तक प्रयोगशालामा बढो रोचक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका ती नेताले भने– ओलीको सम्बन्ध तिनताक भारतीय खुफिया संस्थामार्पmत धेरैसँग गाँसिएको थियो । यद्यपि जब उनी भारती जनता पार्टीका नेताहरुसँग भने गतिलो सम्बन्ध थिएन । उक्त पार्टीका लालकृष्ण आडवाणीसँग थोरबहुत सम्बन्ध राख्न सफल रहेका ओलीले नरेन्द्र मोदीसँग भने नाता गाँस्न भ्याएका थिएनन् । त्यसैले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दाताका उनले मोदीसँग राम्रो नाता जोड्न सकेका थिएनन् । जसले गर्दा उनी उग्र राष्ट्रवादी नेताका रुपमा दरिन पाए ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बखत ओलीले मोदीसँग सम्बन्ध बनाउन नै खोजेनन् । किनभने त्यही बलमा अर्काे चुनाव जित्नु थियो । नभन्दै ०७४ सालको चुनाव उनकै नेतृत्वमा नेकपाले लड्यो । तत्कालिन नेकपा माओवादीसँग ओलीले गठबन्धन गरे । फलतः उनलाई अपार सफलता मिल्यो ।
अब भने ओलीलाई कसैको सहयोग र आशीर्वाद नचाहिने सनक चढ्यो । तर भारतको भूमिका कतै न कतै जोडिन्छ भन्ने ठानेर उनले दुई तिहाई निकट भएरपनि मधेशवादी दलका रुपमा चिनिएको उपेन्द्र यादवको समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याए । यति गर्दा सबैतिरबाट सुरक्षाकवच प्राप्त हुने ठम्याई ओलीको थियो । परिस्थिति उनले सोचे बमोजिम भएन । किनभने उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरुको हुर्मत लिने काम गरे । प्रतिपक्षी दलका नेतालाई केही भागबण्डा दिइर आफ्नो बनाइसकेका थिए ओलीले । उनलाई अब एउटै ध्याउन्न थियो । यति नै बेला पार्टी भित्रका आफ्ना विरोधीको सफाया गर्नुपर्छ । सोही रणनीतिमा ओलीका सबै काम केन्द्रित भए । जसले गर्दा ओली पार्टी र सरकारमा एकलौटी गर्ने पक्षमा अडिग रहे ।
केही समय उनको यो रणनीति कारगर नै रह्यो । जब प्रचण्डलाई समेत उनले ठेगान लगाउन चाहे । अनि सुरु भयो असली द्वन्द्व । भारतीय पक्षका प्रिय भइसकेका थिए प्रचण्ड । प्रचण्डसँगको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति नै नटेर्ने ,उल्टो प्रचण्डकै झाँको झार्ने क्रम तीब्र भएपछि परिस्थिति फेरियो । त्यसपछि ओलीका उल्टा दिन सुरु भए । प्रचण्ड नै साथमा नरहेपछि ओली पार्टीका हरेक निकायमा निरिह बन्न पुुगेका छन् । प्रचण्ड र ओली मिलेर ओलीको सर्वसत्तावादी चरित्रलाई उदाङ्गो पार्ने योजनावद्ध प्रयास थालिएको छ । त्यसले ओलीलाई फेरि पुरानो सम्बन्धले तान्यो ।
रअ सँग प्रचण्डको भन्दा पुरानो सम्बन्ध ओलीको हो । त्यो सम्बन्धलाई प्रयोग गर्न ओली अहिले फेरि कस्सिएका छन् । भारतसँग नक्शा जारी गरेपछि चिसिएको सम्बन्धलाई फेरि तताउने मेसो पनि ओलीले रअ मार्फत खोजेका छन् । मोदीसँग सम्बन्ध सुधार्न उनी हतारिएका छन् । प्रचण्ड र नेता नेपाल मिलेर कतै अपदस्थ पो गर्ने हुन् की भन्ने भय र त्राशले यतिबेला ओलीको ओठतालु सुकेको छ । यही तारतम्य मिलाउन ओलीले रअ प्रमुख गोयललाई डाकेका हुन् ।
रअ प्रमुख गोयलले पनि काठमाडौं आएर प्राय सबैको नाडी छाम्ने काम गरेका छन् । दिउँसो आएका गोयलले भारतीय दूतावासका कर्मचारीमार्फत मधेशी मूलका केही नेतालाई खुला रुपमै भेटे । साथै, सोही साँझ ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक डाके । बैठकले भारतसँगको सीमालगायत यावत विवादमा सकेसम्म नेपालको हितमा हुने गरी वार्ता गरी समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही बमोजिम ओलीले राति ११ बजेदेखि १ बजेसम्म गोयलसँग गोप्य वार्ता गरे । त्यसबारे कसैलाई जानकारी गराइएको छैन । न त परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीको उपस्थिति छ , न शिष्टाचार भेटको कुनै प्रोटोकल नै मानिएको छ ।
यो त केवल प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थमा गरिएको भेटघाट जस्तो मात्र देखियो भन्दै नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेता भीमबहादुर रावलले कडा शव्दमा निन्दा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भनेको नेपालको कार्यकारी प्रमुख हो त्यही प्रोटोकलको मानिससँग भेट गरेको भए बेग्लै कुरा , तर एउटा सुरक्षा निकायका एक जना कर्मचारीसँग गोप्य भेट भएको छ । के के विषयमा कुरा भए त्यसबारे कसैलाई जानकारी छैन । त्यसैले यो देशको पक्षमा गरिएको वार्ता , छलफल वा भेटघाट होइन, केवल ओलीको व्यक्तिगत भेट मात्र हो – उनले भने ।
यदि देशका कुनै पनि विषयमा छलफल गरेको भए त्यसबारे पार्टी कमिटीमा छलफल हुनु पर्छ भन्दै उनले यसबारे अब ओलीसँग जवाफ मागिने बताए । कुनैपनि राष्ट्रिय विषयमा साझा मत बनाइनु पर्छ त्यसका लागि पार्टी वा सरकारमा छलफल हुनुपर्छ भन्दै उनले तर प्रधानमन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण कुर्सीमा बसेका नेताले यस्तो गैरजिम्मेवार काम गर्नु भनेको देशकै लागि लज्जाको विषय हो भनेका छन् ।
रअ प्रमुख गोयललाई भारतीय पक्षको विषेश दूतका रुपमा प्रचार गर्न खोजिएकोमा समेत उनले आपत्ति प्रकट गरे । भारतीय सरकारको विषेश दूतका रुपमा गोयल आएको भए परराष्ट्रमन्त्रालयले किन केही नभनेको ? नेता रावलको प्रश्न छ । साथै, यसबारे भारतीय पक्षलेसमेत केही नबोलेकाले उसको विशेष दूत नरहेको ठम्याई रावलको छ । बरु प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत रुचिमा गोयल आएको उनको बुझाई रहेको छ ।
गोयलसँगको गोप्य मन्त्रणाले ओलीले नेपालको हैसियत नै भूटान भन्दा तल झारेको आरोप उनको छ । भारतसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध स्थापित गर्नुको सट्टा खुफिया संस्थाको तहमा झार्ने काम ओलीले गरेको घुमाउरो पारामा उनले आरोप लगाए । अब त हामीले इण्डियासँग पोलिटिकल्ली डिल गर्नुपर्ने बेला गुप्तचरको तहमा खसाल्ने काम गरेका छौं – उनले भने ।
यो विषय ज्यादै संवेदनशील भएकाले आगामी दिन पार्टी भित्र गम्भिर छलफल गरिने पनि नेता रावलले बताए । पार्टी भित्र देखिएको श्रृँखलावद्ध घटनाक्रमले ओलीको सत्तायात्रा आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । यो परिस्थितिलाई ओलीले नियन्त्रणमा लिन सक्लान् वा प्रचण्ड–नेपालको कोपभाजनमा पर्लान् त्यो चाहिं अबको केही दिनमै प्रष्ट हुने अवस्था छ ।